Radio Malmala Radio malmala ११ दिने सैनामैना मेला सकियो, दश करोड बराबरको आर्थिक कारोबार Radio malmala
११ दिने सैनामैना मेला सकियो, दश करोड बराबरको आर्थिक कारोबार
- कार्तिक १९, २०७५
विष्णु खत्री, सैनामैना ।
देश निर्माणमा व्यापारको आवश्यकता,व्यवसायिक हित सँगै सामाजिक एकता भन्ने नारा सहित कार्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय सैनामैना कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक व्यापार मेलामा करिब १० करोड बराबरको आर्थिक कारोबार गर्दै सकिएको छ । ११ दिन सम्म सञ्चालन भएको मेलामा दश करोड बराबरको आर्थिक कारोबार भएको संघका कोषाध्यक्ष निरज खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मेलामा करिब १ लाख ५० हजार दर्शकले मेलाको अवलोकन गरेको बताउनुभयो ।
महोत्सवमा पौरखले प्राप्त गरेको सफलता प्रर्दशन गरिनुपर्ने सैनामैना नगरपालिकाका मेयर चित्र बहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ । सैनामैना व्यापार संघले आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय सैनामैना कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक व्यापार मेलामा आईतबार समापन समारोहका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मेयर कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले स्थानिय स्तरमा संचालन हुने आगामी मेला महोत्सवले स्थानियको पौरखको सफलता पर्दशन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै स्थानिय उत्पादनलाई प्रथामिकता दिएर संचालन गर्नुपर्नेे बताउनुभयो । नगर प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो –“त्यो मेलाले साच्चिकै सार्थकता तुल्याउँछ, जुन मेलामा स्थानिय उत्पादनलाई जोड दिईएको हुन्छ । ”
११ दिन सम्म संचालन भएको मेलाले सैनामैनाको ऐतिहासिक, पर्यटकीय एवं धार्मिक क्षेत्रको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा चिनाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै सैनामैनाको समृद्धिका लागि महोत्सवले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको बताउनुभयो ।
विशिष्ठ अतिथि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति फणिन्द्र प्रसाद शर्माले मेला भव्य र सव्य रुपमा सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानिय स्तरमा भएको मेलाले किनमेलको फाईदा मात्र नभई अन्य नयाँ आर्कषण ल्याउनुपर्ने बताउँदै नयाँ प्रविधि र कृषिलाई पर्दशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विशिष्ठ अतिथि नेकपाका नेता चेत नारायण न्यौपानेले सैनामैनाको समग्र विकाशका लागि मेला महोत्सव सञ्चालन गर्ने शैलीमा केही परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी वस्तुहरुको प्रवद्र्धन मात्र नभई स्वदेशी र स्थानियलाई उत्पादनलाई मुख्य केन्द विन्दुमा राखेर मेला संचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
समापन कर्यक्रममा महोत्सवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संघका अध्यक्ष जीवनाथ पाण्डेले महोत्सव सबैको सहयोगका कारण पूर्णरुपमा सफल भएको बताउँदै सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राज बहादुर क्षेत्री, राष्ट्रिय जनमोर्चा सैनामैना अध्यक्ष लालबहादुर क्षेत्री, पर्रोहा व्यापार संघका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, ग्लोबल पार्टी प्यालेस एण्ड हाम्रो अर्गानिकका संचालक टंक प्रसाद भट्टराई, सैनामैना नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सबिता भुसाल भण्डारी लगायतले बोल्दै तेस्रो राष्ट्रिय सैनामैना औद्योगिक मेला सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको बताउनुभयो । साथै मेलाले सैनामैनाको पहिचानलाई प्रर्वद्धन गर्नमा सहयोग पु¥याएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महोत्सवमा राखिएका स्टलहरु, सहयोग पु¥याउने संघसंस्था, मिडियाहरु, व्यक्ति, संस्थाका कर्मचारी लगायतलाई सम्मान पत्र तथा प्रशांत्रले सम्मान गरेको थियो ।
महोत्सव हेर्न आउने दर्शकहरुका लागि टिकट बम्फर अफर राखिएको थियो । जसमा राखिएको प्रथम पुरस्कार सैनामैना ४ का निराजन पन्थीलाई परेको छ । उनले यामाहाको १२५ सिसि को स्कुटर प्राप्त गरेका छन् । त्यसै गरी द्वितीय पुरस्कार विमला थारुलाई परेको छ । उनले १२ इन्चको एल.ई.डी. कलर टि.भी. प्राप्त गरेकी छन् । यस्तै तृतिय पुरस्कार सैनामैना वडा नं ६ निवासी बिमला पाण्डेलाई परेको छ । उनले फ्रिज प्राप्त गरेकी हुन् ।
यस्तै मेलामा सेल्फी जोन प्रतियोगिता राखिएको थियो । सबैभन्दा बढी लाईक कमेन्ट र शेयरको आधारमा सैनामैना ४ निवासी सुबास गौतम विजयी भएका छन् । उनले हवाई कम्पनीको मोबाईल प्राप्त गरेका छन् ।
समापन समारोह सैनामैना व्यापार संघका अध्यक्ष जीवनाथ पाण्डेलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम व्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार चालिसेको स्वागत तथा महासचिव देवराज पौडेलको संचालनमा सम्पन्न भएको हो । कार्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको मेला पर्रोहा माविको अगाडिको खेल मैदानमा संचालन भएको थियो ।